[Ikwindla iHomestay ekwindla iRhythm] ICourtyard Cottage + Tatami Queen Bed + Indlu Ephucukileyo + Iprojekta + Idolophu Yakudala + Indawo Yokupaka + I-Green Heart Park + Abanqobi Beemivuzo Ze-Airbnb - I-Airbnb
[Ikwindla iHomestay ekwindla iRhythm] ICourtyard Cottage + Tatami Queen Bed + Indlu Ephucukileyo + Iprojekta + Idolophu Yakudala + Indawo Yokupaka + I-Green Heart Park + Abanqobi Beemivuzo Ze-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu秋葉民宿-小管家
Yayiyinto esenza sagqiba ekubeni sitshintshe amagumbi athile kwistudiyo abe yindawo yokuhlala ukuze abahlobo abangakumbi baqukwe ebomini bethu, kwaye yayiyindlela yethu yokuthanda ubomi.
Eli likhaya lethu kunye nesitudiyo sethu, izinto zokuhombisa zaseJapan kunye nezinto zaseJapan, kwagqitywa ukuba kutshintshwe amanye amagumbi abe yindawo yokuhlala kwimeko eyingozi kakhulu ukuze abahlobo abangakumbi bakwazi ukuqukwa ebomini bethu kwaye abantu abangakumbi bazive ngobomi bethu.Yindlela yethu yokuthanda ubomi, ukuba nobubele kwabanye, ukuthetha inyani kuthi, ukuthetha inyani kuthi, kunye nokuba nabantwana ngaphandle kokuxhatshazwa.
Phofu, sinendawo enye yokuhlala ukuze sivumele abantu abangakumbi bahambe nabantwana ukuba bakhule kunye.Ukunika abantwana ukuchayeka ngakumbi kubantu ongabaziyo ukususela kwiminyaka emincinci nokuba mnandi ekudibaneni nabantu.
Sikwidolophu endala yaseLeshan, sihlukaniswe kakuhle nesiphithiphithi sesixeko kangangemitha ezingamakhulu ambalwa ukusuka kwisitrato esiyintloko.Umoya ucocekile yaye umoya uyahambelana. Ukuzimisela kombuki zindwendwe kuza kwenza wonke umntu azive enovelwano.Unokukhetha ukuhlala nentsapho yethu yonke imihla, ungangena uze uphume emnyango uze uphume ngaphandle ungakhange ubhatale.Vala ucango kwaye uza kuba kwindawo yakho yabucala, ekhuselekileyo nethuleyo.Sisondele kakhulu kwi-Green Heart Park.
Intsapho yethu ingathanda ukuncokola, ukusela iti nokudlala imidlalo kunye nondwendwe ngalunye oluzayo.Kodwa kwakhona ngokuqwalasela ukuba undwendwe lungafuna ukuphumla emva kosuku olude kwisikhephe, yonke into iqhelekile ekhayeni lethu.Akukho mfuneko yokubeka okanye ukuphoxeka. Siza kukuphatha njengabahlobo okanye intsapho, kwaye siyathemba ukuba uza kusiphatha njengabahlobo nentsapho.
Iyadi inemigangatho emibini enokuhlala iindwendwe, inenyanga kunye nemvula.
Ubumnandi bekwindla kumgangatho wokuqala, igumbi elinye elinefestile engabonakaliyo, igumbi elikhulu lebhedi eliyi-1.8m, igumbi lokuhlambela labucala, indawo yokuhlamba impahla, i- Xiaomi projection, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, amanzi ashushu iiyure eziyi-24!
Imvula yasekwindla: kumgangatho wokuqala, igumbi elinye elinefestile nelingabonakaliyo, ii-1.2mons, ezidibene kwibhedi enkulu, zahlukaniswe kwigumbi eliqhelekileyo, igumbi lokuhlambela labucala, i-wasbasin, i- Xiaomi projection, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, amanzi ashushu iiyure eziyi-24!
Ubumdaka basekwindla: kumgangatho wokuqala, igumbi eliqhelekileyo linefestile engabonakaliyo, iibhedi ezimbini zentsimbi zeemitha eziyi-1.2, igumbi lokuhlambela labucala, ibhaskithi yokuhlamba impahla, iTV ye- Xiaomi, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, kunye namanzi ashushu iiyure eziyi-24!
Ikwindla: Umgangatho wesibini, amagumbi okulala ayi-2, igumbi lokuhlala eliyi-1, imithi emikhulu eyi-2 ye-osmanthus ngaphandle kwefestile yegumbi lokuhlala, igadi engaphandle kwefestile yegumbi lokulala, isitayile esicocekileyo saseJapan kunye negumbi, igumbi lokuhlala elahlukileyo, indlu yangasese eyahlukileyo, indlu yangasese eyomileyo emanzi, igumbi lokuhlambela!Kukho i- Xiaomi TV! I-Air-conditioning, iimethi ezine ze-tatami, amanzi ashushu iiyure eziyi-24!
Ubusuku bekwindla: Umgangatho wesibini, amagumbi okulala amabini kunye negumbi lokuhlala elinye, kunye neefestile, ngaphandle kwefestile yegumbi lokulala yigadi, isitayile esitsha sokuhombisa saseJapan, igumbi lokuhlala elahlukileyo elinesofa, igumbi lokuhlamba labucala, igumbi lokuhlambela labucala! Iibhedi ezinkulu eziyi-2 iimitha eziyi-1.8, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, i- Xiaomi projection, amanzi ashushu iiyure eziyi-24.
Ikwindla Rhyme: Igadi, Indawo Eyohlukileyo, Ifestile. Igumbi lokulala eliyi-1, Umatrasi okhethekileyo oyi-1.8m.
Umbuki zindwendwe ngu- 秋葉民宿-小管家